नेपालमै पहिलो पटक वर्ल्डलिंकले सुरु गर्‍यो वाईफाई फाइभ, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग « TechPana | Digging into Tech
सोमबार, चैत्र ३, २०७६ १७:४४
नेपालमै पहिलो पटक वर्ल्डलिंकले सुरु गर्‍यो वाईफाई फाइभ, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
काठमाडौं । अहिले विश्वमा अर्को पुस्ताको वाइफाई अर्थात वाईफाई सिक्सको चर्चा चलिरहेको छ । कतिपय देशले वाईफाई सिक्सलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् ।
यदि तपाईंको डिभाइसले डबल ब्याण्ड वाइफाई सर्पोट गर्छ अथवा ‘८०२.११ एसी’ सिरिज वाईफाई सपोर्ट गर्छ भनेर लेखिएको छ भने तपाईंले वाईफाई फाइभ प्रयोग गरि उच्च गतिको इन्टरनेटको आनन्द लिन सक्नुहेनछ ।
महाबिर पुनले कहाँबाट पाए आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रेरणा ?
काठमाडौं । अधिकांश मान्छेहरुले कुनै काम गर्दाखेरी मैले फलाना मान्छेबाट प्रेरणा पाएँ, फलानाले प्रेरणा दियो
क्लिन फीड कानूनले विश्व फुटबल र क्रिकेटको लाइभ समेत रोकिने अवस्था !
काठमाडौं । विगत केही समयदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलका लागि क्लिन फीड लागु
पुनः सञ्चालनमा आउँदै टूटल–पठाओ, तर प्रहरीले दियो कारबाहीको चेतावनी
काठमाडौं । विगत दुई दिनबाट पठाओले सीमित मात्रामा राइड सेयरिङ सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो